Munaasabadda ciida Awgeed qiime dhimis ay shirkaddu u sameesay macaamiisheeda | Golis Telecom Somalia
Munaasabadda ciida Awgeed qiime dhimis ay shirkaddu u sameesay macaamiisheeda
Shirkadda isgaarsiinta Golis iyadoo farxada ciidul Adxa oo ku beegan maalinta khamiista la wadaagaysa macaamiisheeda sharafta badan ayay u samaysay qiime dhimis la xiriirta wicitaanada Taleefanada.
Macaamiisha isticmaasha adeegga Postpaidka Munaashabadda Ciidul Adxaa Awgeed waxaa loo sameeyay Qiime Dhimis dhan 20% Daqiiqadaha Local-ka sadexda Maalmood ee ciidka oo ka bilaabanaya (24,25,26) si ay eheladooda
iyo asxaabtooda ugula xiriiraan islamarkaana isugu hamblayeeyaan munaasabadda qaaliga ah ee Ciidda.
Sidoo kale Golis Telecom Macaamiisheeda isticmaasha Adeegga Prepaidka ayaa Munaasabadda Ciidul adxaa Awgeed u samaysay Dhiirigelin dhan 25% oo loo raacinayo wixii ay ku shubtaan Maalmaha Ciidka 24,25,26 waxayna
Golis ku leedahay kula Ciid Ehelkaaga iyo Asxaabtaada Farxad iyo Nabadgelyo.
Maamulka shirkadda Golis ayaa sidoo kale ugu hambalyaynaya umadda Islaamka ah meel kasta oo ay joogaan munaasabadda inagu way nee Ciidul Adxa oo ku beegan maalinta Barri ah hadii Alle Ogolaado.
Qiima dhimistan ayaa ah mid ay shirkadda Golis ay samayso maalmaha farxada leh ee ciidaha si ay bulshadeeda iyo macaamiisheeda ugula wadaagto farxada iyo dabaaldaga Ciidaha.